Cool Domains for Sale: - solution.sale, ranID.co, BronzeMask.com, BrandWait.com, series.news, eChainBank.com, ZWVQ.com,
Click icon ee Display a menu of general Safari settings (Marsho icon ah) si ay xaq u of bar cinwaanka, ka dibna dooro Preferences... (Ama jaraa'id oo kaliya Ctrl + , ).
Dooro Security tab (icon qufulka) ugu sareysa ee suuqa kala.
Click ah Safari item ka Apple/System qataara sare ee shaashadda, ka dibna dooro Preferences.
Marka Settings hadal booda baxay, dooro Security tab (icon qufulka) at bar ugu sareeya.
Laga soo bilaabo Home screen dooran Settings icon.
Hoos si Safari item ka dibna waxa (ama tuubada ka jaftaa Safari item liiska tagay haddii aad isticmaasho iPad).